सुदुरपश्चिमकी चर्चित माेडेल झर्ना बाेहाेरा, जसकाे संर्घषकाे कथा यस्तो छ ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	सुदुरपश्चिमकी चर्चित माेडेल झर्ना बाेहाेरा, जसकाे संर्घषकाे कथा यस्तो छ ! » Nepal Fusion
सुदुरपश्चिमकी चर्चित माेडेल झर्ना बाेहाेरा, जसकाे संर्घषकाे कथा यस्तो छ !
The report prepared by Tank Bahadur Budha Arori for the Ujyaalo Times.
छोटो समयमै निकै चर्चा बटुलेकी मोडेल झर्न बोहरा अाजकाज निकै ब्यस्त छिन्। अछाम जिल्ला मेल्लेख गाउँपालिका शोडषा (झडीगाउँ) घर भै हाल कैलाली जिल्लाको कुशुम घाट बसोबास गर्ने बाेहाेका लागि मेला, महाेत्सब, स्टेज कार्यक्रमहरुमा निकै रुचाईएकाे छ।